आखिर के नै रहेछ र जिवन ? आमालाई एक्लै छोडेर गए सिद्धार्थ, जो विना एक सेकेण्ड पनि बस्न सक्दैनथे ! – Classic Khabar
September 7, 2021 83
बिग बोस सिजन १३ का विजेता सिद्धार्थ शुक्ला सधैँका लागि यो संसार छोडेर गइसकेका छन् । ४० वर्षका सिद्धार्थको हृदयघातका कारण निधन भएको हो । सिद्धार्थ आफ्नी आमाको निकै नजिक थिए । आमा विना एकछिन पनि बस्न सक्दैन थिए । उनले केही समय पहिले आफ्नी आमाको लागि मन छुने पोस्ट लेखेका थिए ।
उनले पोष्टमा आमासँग आफ्नो सम्बन्धबारे कयौँ कुरा खोलेका थिए….,मानिसहरु मलाई यस्तो व्यक्तिका रुपमा चिन्दछन्, जो बाहिर निकै रफ देखिन्छ । तर एक व्यक्तिका लागि म सधैँ कोमल हुन्छु, ती हुन् मेरी आमा । उनको अगाडी म पग्लिहाल्छु । मेरी आमा जन्मदेखि नै मेरो लागि विशेष छिन् । तीन सन्तानमध्ये म सानो थिएँ र दिदीहरुसँग खेल्न पाउँदैनथेँ । त्यसैले म सधैँ आमाको वरिपरि नै घुमिरहन्थेँ ।
जब म सानो थिएँ, आमालाई एक सेकेण्ड नदेख्दा पनि रुन्थेँ । उनी रोटी बनाउँदै गर्दा पनि एक हातले मलाई समाइरहेकी हुन्थिन् र अर्को हातले काम गरिरहेकी हुन्थिन् । जब म ठुलो भएँ, तब मेरी आमा मेरो साथी बनिन् । जब म खेलेर आफ्नो बिल्डिङमा फर्किन्थेँ, हरेक कुरा आमासँग सेयर गर्थेँ ।
जुन उमेरमा आमा बुवासँग कुराहरु लुकाइन्थ्यो, म भने आफ्नो जीवनको बारेमा आमालाई सबैकुरा बताउन चाहन्थेँ । उनले मलाई धेरै कुरा सिकाएकि छिन् । मलाई याद छ कि म एकदमै सरारती थिएँ । तर जब आमा मलाई आफ्नो साथमा बसाएर इमान्दार हुन भन्थिन्, तब म तुरुन्त आफ्नो गल्ती मान्थेँ ।
जब मेरो पीताको १६ वर्ष पहिले निधन भयो, आमा नै हाम्रो शक्ति बनिन् । हाम्रो खराब आर्थिक स्थितिका बाबजुद पनि उनले घर चलाइन् । तीन सन्तानको आवश्यकता पुरा गरिन् । हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न उनले धेरै त्याग गरिन् । म बिग बोसमा हुँदा तीन महिनासम्म आमासँग कुरा गर्न पाएको थिइनँ । मलाई थाहा छ कि ३९ वर्षको उमेरमा यो भन्नु उचित छैन तर उनीबाट टाढा रहनु मेरो लागि निकै कठिन थियो ।
त्यसैले जब मलाई शो मा उनको एक चिठ्ठी मिल्यो तब मलाई उनको आवाज सुन्न मन लागेको थियो । मलाई उनी मेरै वरिपरि भएजस्तो महसुस भइरहेको थियो । उनी हरेक पटक मप्रति गर्व गर्छिन्, यो मेरो सबैभन्दा ग्रेट फिलिङ्गस हो ।म संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई । किनकी म आमाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सफल भएको थिएँ ।
उनी मेरो सबथोक हुन् । आज पनि मेरी आमा मलाई सल्लाह, सुझाव दिइरहन्छिन् । जब मैले ३ महिना लामो समयपछि उनलाई बिग बोसको सेटमा देखेको थिएँ, तब उनले मलाई हरेक समय छोटो लगाउन बन्द गर, जिन्स लगाऊ भनेकि थिइन् । आज भाग्यले यस्तो खेल खेलेको छ कि आमासँग दुई मिनेट पनि टाढा बस्न नसक्ने सिद्धार्थ सधैँका लागि उनलाई छोडेर गएका छन् !
Prevयीनै हुन् तामाका मुनाजस्ता देखिने अबोध बालवालिकासहित मारिएका ६ जना कार्की परिवार
Nextकाका ससुराले बुहारीलाई हात का टेर र गतको सिन्दुर हाल्दै गर्दा यस्तो अवस्थामा भेटिए ससुरा बुहारी (भिडियो हेर्नुस्)
स्व. राजा बिरेन्द्रले ऐश्वार्यालाई यस्तो भन्दै सम्झाउथे, जनताले दु:ख गरेर तिरेको करबाट दरवार देखि फर्निचर किनिएका हुन, पुरानो सोफालाई मर्मत गरेर चलाउनुपर्छ, नयाँ किन्नु पर्दैन !
भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकालीमा बगेका जयसिंह धामीको शव ड्रोनका सहायतामा खोज्ने तयारी
१७ वर्षमा बिबाह गरी छोरा जन्माए, २१ वर्षमा फेरि अर्को सौता भित्राएर कान्छीसँग मस्ती गर्ने श्रीमान सम्पर्कमा छोरा र श्रीमतिलाई अधिकार दिन तयार फोनमा पर्यो चर्काचर्की (भिडियो सहित)